Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Aadista Vegas? Xidh Maaskaro
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Aadista Vegas? Maaskaro xir!
Inta badan gobollada Nevada waxay ku soo noqdeen waajibaadka maaskaro iyagoo isku dayaya inay ka ilaaliyaan kiisaska cusub ee COVID-19 ee Mareykanka oo dhan. 16 -ka gobol ee gobolka, 12 waxay ku noqdeen inay u baahdaan xirashada maaskaro.
Ku wajahan Magaalada Sin? Waxaad u baahan doontaa inaad xirato maaskaro.
Ma qorsheyneysaa inaad ku fariisato casino saacado mashiinka booska ama miiska craps? Waxaad u baahan doontaa maaskaro inta aad halkaas joogto.
Ma rabtaa inaad kaqaybqaadato makhaayadaha aan dhammaadka lahayn? Hubaal, hore u soco, laakiin weli waxaad u baahan doontaa inaad xirato maaskaro inta u dhexeysa cunidda dhabta ah.
Dalxiisayaashu waxay leeyihiin dareeno isku dhafan oo ku saabsan waajibka maaskaro inuu dib u soo noqdo. Qaarkood waxba ma dhibaan. Dhab ahaantii, qaar badan ayaa go'aansaday inay keligood iska ilaaliyaan waji -xidhka si taxaddar la'aan ah. Laakiin kuwa kale, kuma faraxsana inay u hoggaansamaan. Gaar ahaan kuwa sigaarka caba. Inaad maaskaro hoos u soo jiidato, jiidid, neefsato oo aad neefsato, maaskarada dib u soo celi waxay iyaga u tahay xanaaq.
Guud ahaan dalka, waxay umuuqataa in masuuliyiin badan oo dowladeed ay sidoo kale daalan yihiin, waxayna doorbidayaan inay u oggolaadaan dadka deegaanka inay go'aansadaan. Xiro maaskaro, ha xiran maaskaro, iyagaa iska leh. Qaado Hawaii tusaale ahaan. Xitaa haddii tirooyinkooda kiiskooda cusub ay kor u dhaafayaan wixii ay dib ugu noqdeen "COVID-19 heyday" ee tirakoobka, Guddoomiyuhu wuxuu sheegay inuusan sameynin wax dhaqdhaqaaq ah oo ku amraya xirashada maaskaro. Maanta, shuruudihiisu waxay ku saleysan yihiin oo keliya fiirinta xogta tallaallada iyo helitaanka xasaanadda xoolaha. Sida iska cad waxa dhacaya inta u dhexeysa hadda iyo ka dib - haddii “markaa” weligeed timaaddo - wax welwel ah ma leh. Shaqaalaha caafimaadku waxay yeelan karaan lafo ay isaga soo qaataan maadaama isbitaalladooda ay maalin walba buuxinayaan bukaanno badan oo COVID-19 ah.
Dabaaldegyada Kibirka ee Sebtember ayaa ka taliya Malta, oo qarsoon ...
Harada Powell oo baaba'aysa: Aad bay uga xun tahay dalxiiska!
Bahamas waxay soo bandhigaysaa Xagaagii 2aad Virtual Junkanoo Summer ...